အွန်လိုင်းနမူနာကြီးတစ်ခုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - တစ် ဦး ချင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလက္ခဏာများ (2019) - Your Brain On Porn
တစ်ဦးချင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် coercive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2019) ၏အရိပ်လက္ခဏာ: ကြီးမားတဲ့အွန်လိုင်းနမူနာအတွက် Hypersexual အပြုအမူ
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2019 မေလ 23: 1-10 ။ Doi: 10.1556 / 2006.8.2019.16 ။
အိန်ဂျယ် J ကို1, Kessler တစ်ဦးက1, Veit M က1, နစ်မြုပ်ကို C1, Heitland ငါ1, Kneer J ကို1, Hartmann ဦး1, Kruger THC1.
hypersexual ရောဂါ (HD ကို) ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်းရိပ်မိပြဿနာများ၏အမြင့်ဆုံးပျံ့နှံ့နေသော်လည်းအရေးကြီးသောကဏ္ဍများ underinvestigated ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုကဂျာမန်စကားပြောလူဦးရေကနေစိတ်ကျရောဂါ, ပြဿနာဘာလက္ခဏာတွေနှင့်ကြီးမားသောအွန်လိုင်းနမူနာအတွက် coercive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရောဂါလက္ခဏာများကို examine ။
အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းများတွင် N = 1,194 (n = အမျိုးသမီး ၅၆၄ ဦး သည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးစိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများ (PHQ-564), HD (HBI-9)၊ ပြproblemနာရှိသောဆိုက်ဘာဆက်ဆံ (s-IATsex) ၏လက္ခဏာများနှင့်ပါ ၀ င်သူများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုအကဲဖြတ်ရန်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာမေးခွန်းများပါဝင်သည်။ , စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူများအပါအဝင်။
အမျိုးသားများအတွက်တိုးမြှင့် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်း။ 59 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 18% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏လုပ်ရပ်များကဖော်ပြခဲ့သည်သော်လည်းထိုမှတပါး, အမြိုးသမီးယောက်ျားနဲ့ 21% ၏ 4%, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူ, HD လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ပြဿနာဘာ, စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက် (TSO), ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်မှာလည်း HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးတွေအတွက် TSO များ၏ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောက်ျားထက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, ထိုညွှန်ပြ။
ဤသည်မှာစစ်တမ်း HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်မကြာခဏအကြီးအကျယ် intra- နှင့်လူ့အခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်ရှိနေသည်။ ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပမာဏကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးတွေအတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်မှချိတ်ဆက်ခံရဖို့ပုံရသည်။
KEYWORDS: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ; စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ; hypersexuality; ပြဿနာဘာ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်
Kafka (2010က) အမျိုးအစားများ၏ပဉ္စမ edition အတွက်ထည့်သွင်းခံရဖို့အဖြစ် atheoretical ဝေါဟာရကို "hypersexual ရောဂါ" (HD) အဆိုပြုထား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5; အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး [ယား] 2013) ။ ထို့အပွငျ hypersexual အပြုအမူ ICD-11 (ခုနှစ်တွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါအဖြစ်ပါဝင်ဘို့အဆိုပြုပြီးပါပြီGrant et al ။ , 2014) ။ အဆိုပါအကြံပြုအမျိုးအစားပြင်းထန်သောထပ်တလဲလဲဖော်ပြသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်တစ်မှုများထပ်တလဲလဲပုံစံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအရေးကြီးသောဒေသများရှိဆေးခန်းသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းဖြစ်စေသောထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ရရှိလာတဲ့တိုကျတှနျးထား, ဥပမာ, ထပ်ခါတလဲလဲကြားဆက်ဆံရေးပြတ်တောက် (ဖြစ်ပါတယ်Kraus et al ။ , 2018) ။ ထို့အပြင်ရောဂါဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များသို့မဟုတ်ကနေအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမစိတ်ကျေနပ်မှု deriving ရှိနေသော်လည်းထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဆက်လက်ပါဝင်သည်။ ရောဂါအတွက်ဖယ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူအကြောင်းကိုကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြသို့မဟုတ်မရရှိခြင်း၏နှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ပါသည်Kraus et al ။ , 2018) ။ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာတော့ HD ကိုအဆိုပြုထားစံ (Kafka, 2010) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အဆိုပြုစံဆင်တူသည်။ သို့သော် HD ကိုအဆိုပြုထားစံအတိအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူနှင့်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲကြောင့်ရောဂါဖယ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်သူတို့တစ်တွေစံနှုန်းအဖြစ်ကနေအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမစိတ်ကျေနပ်မှု deriving ရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဆက်လက်မပါဝင်ခဲ့ချေ။ ဒီလေ့လာမှုကထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, ပြဿနာဘာလက္ခဏာတွေနှင့် coercive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရောဂါလက္ခဏာအဖြစ် hypersexual အပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဝိသေသလက္ခဏာများ, စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာများဆနျးစစျဖို့, အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်ကြီးမားတဲ့ဂျာမန်စကားပြောလူဦးရေအတွက်ကောက်ယူခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးများနှင့် Non-လိင်ကွဲယောက်ျားအပေါ်တွေ့ရှိချက်များကိုမြင်ရ, ပြန်လည်သုံးသပ် (ကျဲဆက်လက်တည်ရှိနေချိန်တွင် hypersexual အပြုအမူများပျံ့နှံ့အပေါ်အများစုကဒေတာ, လူတို့အားကန့်သတ်ထားပါသည် Montgomery-ဂရေဟမ်, 2017) ။ ဒါဟာ (hypersexual အပြုအမူအမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင်ပိုပြီးအဖြစ်များကြောင်းပေါ်လာသည်Skegg, Nada-Raja, Dickson, & Paul, 2010; Walton, Cantor, Bhullar, & Lykins, 2017) ။ အမြိုးသမီးမြား၏ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းများအားဖြင့်ပြသမကြာမီကဒေတာ (n = 1,174) နှင့်ယောက်ျား (n = 1,151) တွေ့ရှိချက်အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွန်းအားများ၊ ခံစားချက်များနှင့်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲများကြောင့်အမျိုးသမီး ၇% သည်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသား ၁၀.၃% သည်ဆေးခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုများကိုပြသခဲ့သည် (Dickenson, Gleason, Coleman, & Miner က, 2018).
ကျဘာ (ဥပမာ, အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစားသုံးမှုWéry & Billieux, 2017) ။ (ပါဝင်သည်ဟု "Access ကို-မတတ်နိုင်-အမည်ဝှက်," အပေါငျးတို့သညျအငျတာနကျ၏အင်္ဂါရပ်များဖြစ်ကြသည့်ပိုပြီးသိသာဖြစ်လာကြပြီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ - အဆိုပါ "သုံးဆ-တစ်ဦးကအင်ဂျင်" ဘာအတွက်မြင့်တက်ကရှင်းပြသည်Cooper က, 1998) ။ တကယ်တော့, ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းများယောက်ျားတစ်အများစု (64% -70%) နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတတိယဖို့လေးပုံတစ်ပုံ (23% -33%) (အတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြGrubbs, Kraus, & ပယ်ရီ, 2018; Rissel et al ။ , 2016) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက် ပို. စားသုံးနှင့်အတူ, ကျားမနှင့်အသက်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်Janghorbani & Lam, 2003; Træen, Nilsen, & Stigum, 2006).
Hypersexual အပြုအမူများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပုံမမှန်လက္ခဏာတွေမကြာခဏချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုမှာယခင်လေ့လာမှု (Weiss, 2004) (အထီးလိင်စွဲနေတဲ့နမူနာများတွင်စိတ်ကျရောဂါ၏ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းN အထွေထွေအထီးလူ ဦး ရေအတွက် 220% ၏ခန့်မှန်းခြေမြင့်မားသောနှိုင်းယှဉ်ပါက = 28), 12% ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပေါင်းစပ်, ရလဒ်တွေကို hypersexual အပြုအမူအတွက် comorbid စိတ်ကျရောဂါမမှန်များအတွက် 28% -69% မြင့်မားအကွာအဝေးအကြံပြု (Kafka & Hennen, 2002; ရေမွန်, Coleman, & Miner, 2003; Weiss, 2004).
Hypersexual အပြုအမူ (အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာသို့မဟုတ်တင်းမာမှုကိုရှောင်ရှားရန်, မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပေါင်းစပ်အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမှတဆင့်ထုတ်ပြုမူသည်နှင့်တစ်ဦးအလုပ်မဖြစ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာအဖြစ်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ, ဥပမာအားReid, လက်သမား, Spackman & Willes, 2008) ။ ယနေ့အထိ, hypersexual အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်အကြားမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်သွယ်မှုရှိပုံရသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ (လိင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းစားသုံးအထူးသဖြင့်အခါ, ညစ်ညမ်းတွေတိုးလာစားသုံးမှုထောက်ခံထိုးစစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အမှန်တကယ်ထိုးစစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့နှင့်တကွကြွလာသည်ဟုတွေးဆခဲ့သည်Hald, Malamuth, & Yuen, 2010) ။ အွန်လိုင်းဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်စစ်မှန်သောဘဝအဆက်အသွယ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေဆဲ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမျိုးသမီးများ၏ 9.4% ရငျးနှီးဆက်ဆံရေးအတွက်အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြ, အမျိုးသမီးများ၏ 16.9% နှင့်ယောက်ျား၏ 8.0% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း မုဒိမ်းမှုထက်အခြား (Black က et al ။ , 2011).
ဒီလေ့လာမှုကကြီးမားတဲ့ဂျာမန်စကားပြောလူဦးရေအတွက်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နဲ့ဆက်စပ် intra- နှင့်လူ့အခက်အခဲများဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး intrapersonal အခက်အခဲများစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေပါဝင်သည်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏ပြုမူသောအမှုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြသည်လူ့အခက်အခဲများစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ယခင်လေ့လာမှုများ (အပေါ် အခြေခံ.Kafka & Hennen, 2002; Raymond et al ။ , 2003; Weiss, 2004) hypersexual အပြုအမူအတွက်စိတ်ကျရောဂါမြင့်မား comorbid နှုန်းထားများပြသကြောင်း, ဒါကြောင့် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောတွေးဆခဲ့သည်။ hypersexual အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive သဘောထားတွေ interlinked စေခြင်းငှါပဏာမတွေ့ရှိချက် (အပေါ် အခြေခံ.Hald et al ။ , 2010), ကျနော်တို့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏အမှန်တကယ်ပြုမူ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျှင်စူးစမ်းလေ့လာချင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, HD လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ယူဆခဲ့သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်၏ထွန်းသစ်စဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့် (Cooper က, 1998), ငါတို့သည်လည်း, HD လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်ပြဿနာဘာနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့ယူဆ။
ကနဦးနမူနာပါဝင်သည် N = 2,069 တစ် ဦး ချင်းစီ (n = ၈၉၆ အမျိုးသမီး၊ n = ၂၈ သတင်းအချက်အလက်မရှိ၊ ပုံကိုကြည့်ပါ 1).
ပုံ 1 ။ သင်တန်းသားများကို၏်ထမ်းခေါ်ယူမှု
နောက်ဆုံးနမူနာပါဝင်သည် N = 1,194 တစ် ဦး ချင်းစီ [n = အမျိုးသမီး ၅၆၄ ယောက်၊ M = ၁၈.၅၄ နှစ်၊ စံသွေဖည်မှု (SD) 15.25 =; n = ၆၃၀ ယောက်ျား၊ အသက် M = ၅၀.၅၂ နှစ်၊ SD မေးခွန်းလွှာများဖြည့်စွက်သော ၁၉.၃၄ ။ သင်တန်းသားများကို၏နံပါတ်ကနေဒေတာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြရတယ်: n = 687 မေးခွန်းလွှာဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် n = 188 ဖြစ်စေအသက် 18 နှစ်ကထက်ငယ်သည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အသက်အရွယ်ဖော်ပြမထားဘူး။ ပါဝင်သူပျမ်းမျှအသက်မှာ ၃၂.၉၉ ဖြစ်သည်။SD = 10.78) နှစ်ပေါင်း။ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းကအနည်းဆုံးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ အများစုကသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်ကွဲ (၈၃%) အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပြီး၊ ဘစ်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု (၁၃%) ရှိသူ ဦး ရေနည်းပါးပြီး ၄% ကသာသူတို့ကိုယ်သူတို့လိင်တူဆက်ဆံသူများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ သင်တန်းသားအများစုသည်လက်မထပ်ရသေး (၇၅%)၊ သို့သော် ၇၀% ဝန်းကျင်မှာဆက်ဆံရေးရှိကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပါဝင်သူ ၆၀% တွင်ကလေးမရှိခဲ့ပါ (ဇယား 1).
စားပွဲတင် 1. ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယား
Sociodemographic variable တွေကို
ပညာရေး (အဘယ်သူမျှမကျောင်းတွင်ကျောင်းဆင်းပွဲ / အလယ်တန်းကျောင်း / အလယ်တန်းခေတ်သစ်ကျောင်းကို / တက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်အရည်အချင်းများ / လေ့လာမှုများ) 15/107/385/383/304 1/9/32/32/26
လိင်တိမ်းညွတ် (ရိုးရိုး / လိင်ကွဲ / လိင်တူဆက်ဆံသူ) 987 / 162 / 45 83 / 13 / 4
မိသားစုအဆင့်အတန်း (တစ်ခုတည်း / လက်ထပ် / ကွာရှင်းသို့မဟုတ် / မုဆိုးမကွဲကွာ) 756 / 300 / 128 / 10 63 / 25 / 11 / 1
မိတ်ဖက် (တစ်နှစ်ကျော်မိတ်ဖက်နှင့်အတူတစ်နှစ် / ထက်လျော့နည်းမိတ်ဖက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဖက် /) 364 / 115 / 715 30 / 10 / 60
သားသမီးများ၏နံပါတ် (0 / 1 /2/3/ ≥4) 719/185/198/66/26 60/15/17/6/2
ကျနော်တို့ကဂျာမန်စကားပြောလူဦးရေကြားတွင်အွန်လိုင်းမှလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေတာကို SoSci-စစ်တမ်းတစ်ခုအခမဲ့-access ကို, အွန်လိုင်းစစ်တမ်းပလက်ဖောင်းသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ site ကိုမှတစ်ဦးက link ကို hypersexual အပြုအမူများအတွက် Self-အကူအညီနဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ posted နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆက်အသွယ်များနှင့် Hildesheim, ဂျာမနီတက္ကသိုလ်များ၏စာပို့စာရငျးကိုစလှေတျခဲ့သညျ။ ထို့အပြင်, အွန်လိုင်းသတင်းစာများလေ့လာမှုအကြောင်းကိုဆောင်းပါးများထုတ်ဝေနှင့်၎င်းတို့၏ဆောင်းပါးများထဲမှာမှ link တစ်ခုပါဝင်သည်။ link ကိုထည့်သွင်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အချို့အတိအလင်း "လိင်စွဲ" ဆည်းကပ်ခံရကြသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏အသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက် ပေး. အဆုံးမှာနောက်ထပ်လေ့လာမှုများအဘို့မိမိတို့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုချန်ထားနိုင်ဘူး။
Hypersexual အပြုအမူ Inventory-19 (HBI-19)
ဒီလေ့လာမှုက, HBI-19 ၏ဂျာမန်ဗားရှင်း (ခုနှစ်တွင်Reid, Garos, Carpenter, & Coleman, 2011) HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏ 19 ပစ္စည်းများကိုအဆိုပါ DSM-5 (အတွင်း, HD အမျိုးအစားများအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်သောစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံထားတယ်Kafka, 2010) ။ အဆိုပါပစ္စည်းများမှတုံ့ပြန်ချက်5(ထံမှအထိတစ်ဦး 1-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဘယ်တော့မှ) (5 မှမကြာခဏ) ။ ≥53၏ပဏာမ cut-off အမှတ် (နှစ်ခုလက်တွေ့နှစ်ယောက်ထိန်းချုပ်နမူနာများ၏အခြေခံပေါ်မှာအဆိုပြုခဲ့သည်Reid et al ။ , 2011), ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာပိုကြီးတဲ့နမူနာများ၏အခြေခံပေါ်မှာပယ်ချခံခဲ့ရသည် (Bőthe et al ။ , 2018).
စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ PHQ-9 (များ၏ဂျာမန် version ကိုအသုံးပြုခဲ့Kroenke & Spitzer, 2002; Löwe, Kroenke, Herzog, & Gräfe, 2004) ။ ၎င်း၏ကိုးပစ္စည်းများကို (ထို DSM-5 စံအပေါ်အခြေခံထားတယ်ယား, 2013) အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါပါ။ လူနာတွေသူတို့ကအတိတ်ကာလ2ရက်သတ္တပတ်ကျော်စာရင်းလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိဟုမေးနေကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ PHQ-9 Dimensional ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ တုံ့ပြန်ချက်4(နေ 0-အမှတ် Likert စကေးနှင့်အကွာအဝေးပေါ်ဖမ်းမိနေကြတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး) (3 မှနီးပါးနေ့တိုင်း), 0-27 တစ်ဦးကို item ရမှတ်အကွာအဝေးပေးခြင်း။ အဆိုပါပစ္စည်းသည်ရမှတ်ပြင်းထန်မှုများတဲ့အတိုင်းအတာ (အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်Kroenke & Spitzer, 2002).
ပြဿနာဘာ၏ရောဂါလက္ခဏာများ S-IATsex (တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ , 2011) ။ တုံ့ပြန်ချက်ကနေအထိတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ဘယ်တော့မှ သို့ မကြာခဏ.
ဤသည် Self-ဒီဇိုင်းမေးခွန်းလွှာပါဝင်သူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆန်းစစ်နှင့်အသက်အရွယ်အကြောင်းကိုပစ္စည်းများပါဝင်သည်, လိင်, စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက် (TSO) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်မတူညီနှင့်အတိတ်ကာလတစ်ဖက်, ညစ်ညမ်း, ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်နှင့်အတူတွေ့ကြုံ တစ်နှစ်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းများကို "? အစဉ်အဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူလုပ်ဆောင်မှတစ်စုံတစ်ဦးကိုအတင်းအကျပ်အကြောင်းကို fantasized ပါပြီ" သင်တန်းသားများကိုရှိမရှိဟုမေးသို့မဟုတ် "အစဉ်အဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူလုပ်ဆောင်မှတစ်စုံတစ်ဦးကိုအတင်းအဓမ္မပြီလော"
ဒေတာအားလုံးကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Windows အတွက် SPSS ဗားရှင်း 24 (IBM®ကော်ပိုရေးရှင်း, Armonk, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလွတ်လပ်သောသုံးပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် t-tests သို့မဟုတ် dichotomous variable တွေကိုနှင့်2×2ထက်ပိုကြီးတဲ့စားပွဲများအတွက် Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ်မှု။
hierarchical မျိုးစုံ linear ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်ဦးက Moderator variable ကိုအဖြစ်ကျား, မအတူစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့ (PHQ-9 နှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်) နှင့် hypersexuality (HBI-19) စမ်းသပ်ဖို့အလုပ်ခန့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ PHQ-9 တစ်မက်ထရစ် variable ကိုအဖြစ်, ယုတ်ဗဟိုပြုခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်သက်တမ်းစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ကျား, မများ၏ယုတ်ဗဟိုပြု variable ကိုမပွားများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများ (ΔR2) စိတ်ကျရောဂါနှင့် hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရိုးရှင်းသောတောင်စောင်းနှင့်အတူပြသလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ variable တွေကိုအဘို့အနိမ့်တန်ဖိုးများကိုတန်ဖိုးများနှင့်အတူဘာသာရပ်များအဘို့ခန့်မှန်းနေကြသည် 1 SD အုပ်စုရဲ့ယုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြင့်မားတန်ဖိုးများကိုတန်ဖိုးများနှင့်အတူဘာသာရပ်များအဘို့ခန့်မှန်းနေကြသည် 1 SD အုပ်စုရဲ့ယုတ်အထက်။
အဆိုပါလေ့လာမှုလုပျထုံးလုပျနညျးဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ Hannover Medical School ကျောင်းတွင်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့လေ့လာမှုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွပေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အသိပေးသဘောတူညီခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။
လူတို့သညျအကြား HBI-19 ရမှတ်၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (M = 50.52, SD = ၁၉.၃၄) နှင့်အမျိုးသမီးများ (M = 33.82, SD = 15.25) ယောက်ျားများတွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များထင်ရှား, t(1,174) = 16.65, p <.001,d= 0.95 ။ HBI-53 အတွက် cut-off ရမှတ်ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ကိုအဆိုပြုထား (Reid et al ။ , 2011) ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာ (Bőthe et al ။ , 2018) ။ အဟောင်းကို cut-off ရမှတ်လျှောက်ထားခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်, HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုများတိုးချဲ့အဆင့်ဆင့်ပြသကြောင်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတစ်သိသိသာသာကြီးမားအရေအတွက်ကရှိပါလိမ့်မယ်။ စုစုပေါင်း N = ၃၆၀ ယောက် (n = 74 သို့မဟုတ် 13.1% အမျိုးသမီးများ၏; n = ယောက်ျား၏ 286 သို့မဟုတ် 45.4%) ကအနည်းဆုံး 19 ၏ HBI-53 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ရှိ။ , ကျန်ရှိနေသေးသော n = ၃၆၀ ယောက် (n = အမျိုးသမီး ၄၉၀၊ n = 344 ယောက်ျား) တစ် ဦး HBI-19 ပေါင်းလဒ်ရမှတ် 53 <XNUMX (စားပွဲတင် 2).
စားပွဲတင် 2. လိင်အကြားနှိုင်းယှဉ်
effect အရွယ်အစား (d)
PHQ 564 16.76 (5.19) 630 15.42 (5.13) t(1,192) = -4.491 <.001 0.270
s ကို-IATsex 564 15.44 (6.73) 629 26.91 (11.78) t(1,018) = 20.9 <.001 1.121
စားသုံးမှုညစ်ညမ်း 549 1.05 (3.06) 617 6.64 (11.98) t(705) = 11.194 <.001 0.657
တစ်ဖက်နှင့်အတူ TSO-ကြုံတွေ့ 558 1.55 (2.85) 622 2.64 (5.51) t(953) = 4.322 <.001 0.252
TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ 555 3.01 (5.69) 626 7.87 (9.63) t(1,034) = 10.688 <.001 0.623
လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက် 562 2.77 (10.42) 626 6.01 (19.09) t(987) = 3.683 <.001 0.208
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ 564 24 630 117 χ2(1) = 58.563 <.001
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive စိတ်ကူးယဉ် 564 119 630 373 χ2(1) = 178.374 <.001
မှတ်စု. SD: စံသွေဖည်; HBI-19: hypersexual အပြုအမူတိုင်းတာ Hypersexual အပြုအမူ Inventory; PHQ-9: လူနာကနျြးမာရေးမေးခွန်းလွှာ-9 ၏ရမှတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတိုင်းတာခြင်း, s ကို-IATsex: ပြဿနာဘာတိုင်းတာခြင်းတိုတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းလိင်၏ရမှတ်; TSO-coitus: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူကြုံတွေ့; TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်ခံစားခဲ့ရသညျ။
ဒီလေ့လာမှုမှာနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများယောက်ျားအတွက် PHQ-9 (အမြိုးသမီးမြား၏ပေါင်းလဒ်ရမှတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားသောနှုန်းပြ M = 15.41, SD = 5.12; ယောက်ျား M = ၆၈.၃၃၊ SD = 5.19) လိင်နှစ် ဦး စလုံးစိတ်ကျရောဂါ၏အလယ်အလတ်မှပြင်းထန်သောလက္ခဏာတွေပြသခဲ့သည်ညွှန်ပြ, t(1,192) = -4.491, p <.001,d= 0.27 ။ အမျိုးသမီး ၆၁ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသား ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသည်အနည်းဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ပျမ်းမျှအားတွင်, ယောက်ျား (အသုံးစရိတ် 6.64 နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်SD = ၁၁.၉၈) လွန်ခဲ့သောအပတ်က ၁.၀၅ နာရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု (SD အမျိုးသမီးများအတွက် = 3.06) t(705) = 11.194, p <.001, d = 0.657 ။ ထို့အပြင်အမျိုးသားများအနေဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသူ TSO ရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (M = ၆၈.၃၃၊ SD = 5.51) အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (M = ၆၈.၃၃၊ SD = 2.85), t(953) = 4.322, p <.001, d = ၀.၂၅၂ အဖြစ်အမျိုးသားများတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသော TSO (M = ၆၈.၃၃၊ SD = 9.63) အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (M = ၆၈.၃၃၊ SD = 5.69), t(1,033) = 10.688, p <.001, d = 0.623 ။ ထို့အပြင်အမျိုးသားများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလိင်ဆက်ဆံဖက်များပိုမိုတင်ပြခဲ့သည် (M = ၆၈.၃၃၊ SD = 10.42), မိန်းမများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (M = ၆၈.၃၃၊ SD = 10.42), t(978) = 3.683, p <.001, d = 0.208 ။ အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်သိသိသာသာပိုမိုများပြားသောရမှတ်များရှိသည့်ပြbersနာဆိုက်ဘာဆက်ဆတ်အတွက်လည်းအလားတူတွေ့ရှိခဲ့သည် t(1,018) = 20.9, p <.001, d = 1.121 ။
နှစ်ဦးစလုံးလိင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ၏စိတ်ကူးယဉ်သတင်းပေးပို့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးသိသိသာသာကြီးမားအရေအတွက်ကရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း 30% (n = ၁၁၉) နှင့်အမျိုးသား ၆၀% ကတစ်စုံတစ် ဦး အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနေသည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်2(1) = 178.374, p <.001 ထို့အပြင်အမျိုးသားများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်2(1) = 58.563, p <.001 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, ယောက်ျား၏ 20% (n = 117) နှင့်အမျိုးသမီးများ၏ 4% (n = 24) တစ်စုံတစ် ဦး ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုဇယားတွင်ပြသလျက်ရှိသည် 3။ အလယ်အလတ်ဆုတ်ယုတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ခန့်မှန်းအဖြစ် PHQ-9), ကျား, မ (က Moderator), နှင့် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု (HBI-19) ၏အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းမှာ PHQ-9 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်သည် HBI-8.4 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ကှဲလှဲ၏ 19% ကရှင်းပြခဲ့သည် F(1, 1192) = 110.2, p <.001 ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုကိုရှင်းပြချက်သိသိသာသာတိုးပွားစေခဲ့သည်R2 = .222, ΔF(1, 1191) = 381.52, p <.001 PHQ-9 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်နှင့်ကျားမတို့၏အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုသည်တိုးများလာခြင်းR2 = .009, ΔF(1, 1190) = 15.11, p <.001 ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သိသိသာသာနှင့် HBI-31.5 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်၏ 19% ကှဲလှဲရှင်းပြသည်, R2 = .315, F(3, 1190) = 182.751, p <.001
စားပွဲတင် 3. ဆက်စပ်မှုနှင့် Cramer ရဲ့ V
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ၏စိတ်ကူးယဉ်
အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ
s ကို-IATsex .171 ** -
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ၏စိတ်ကူးယဉ် .123 .451 ** -
အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ .116 .377 ** .326 ** -
TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ .064 .429 ** .368 ** .328 ** -
TSO-အတူမိတ်ဖက် -.150 .180 ** .183 .226 * .356 ** -
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု .030 .454 ** .452 ** .336 ** .330 ** .158 ** -
မိတ်ဖက်များ၏နံပါတ် (အတိတ်နှစ်) .004 .174 ** .245 * .244 ** .208 ** .481 ** .254 ** -
မှတ်စု။ မက်ထရစ် variable တွေကို၏ Bivariate Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှု။ Cramer ရဲ့ V အမည်ခံ variable တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြပါလျှင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ PHQ-9: လူနာကနျြးမာရေးမေးခွန်းလွှာ-9 ၏ရမှတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတိုင်းတာခြင်း, s ကို-IATsex: ပြဿနာဘာတိုင်းတာခြင်းတိုတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းလိင်၏ရမှတ်; TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်ခံစားခဲ့ရသညျ။
*p <.05 (asymptotic significances; နှစ် ဦး ကိုအမြီး) ။ **p <.01 (asymptotic significances; နှစ် ဦး ကိုအမြီး) ။
တစ်ဦးကစက္ကန့်တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ် (ခန့်မှန်းကဲ့သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ကျား, မ (က Moderator), နှင့် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု (HBI-19) ၏အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း, HBI-11.3 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ကှဲလှဲ၏ 19% ကရှင်းပြခဲ့သည် F(1, 1192) = 151.96, p <.001 ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုကိုရှင်းပြချက်သိသိသာသာတိုးပွားစေခဲ့သည်R2 = .111, ΔF(1, 1191) = 161.1, p <.001 PHQ-9 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်နှင့်ကျားမတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်သိသိသာသာကှဲလှဲခှဲခွားခွားနားမှုဖွစျစခွေငျးငှါမဟုတျပါR2 <.001, ΔF(1, 1190) = 0.04, p = .834 ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သိသိသာသာနှင့် HBI-21.9 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်၏ 19% ကှဲလှဲရှင်းပြသည်, R2 = .219, F(3, 1190) = 111.09, p <.001
တစ်ဦးကတတိယတည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏လုပ်ရပ်များ (ခန့်မှန်းကဲ့သို့), ကျား, မ (က Moderator) အတွက်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း, HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု (HBI-19) ၏အဆင့်ဆင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏လုပ်ရပ်များသည် HBI-6.8 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်ကှဲလှဲ၏ 19% ကရှင်းပြခဲ့သည် F(1, 1192) = 87.2, p <.001 ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုကိုရှင်းပြချက်သိသိသာသာတိုးပွားစေခဲ့သည်R2 = .146, ΔF(1, 1191) = 220.38, p <.001 PHQ-9 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်နှင့်ကျားမတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်သိသာထင်ရှားသောကှဲလှဲမှုရှင်းပြချက်ကိုမဖြစ်စေခဲ့ပါR2 = .003, ΔF(1, 1190) = 4.69, p = 0.031 ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်သိသိသာသာနှင့် HBI-21.7 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်၏ 19% ကှဲလှဲရှင်းပြသည် R2 = .217, F(3, 1190) = 109.78, p <.001
နောက်ထပ်တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်ခန့်မှန်းပြဿနာဘာအဖြစ်သုံးပြီးပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး, TSO တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်, ကိုလောင်ညစ်ညမ်း၏အချိန်နှင့်အတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်, ကျား, မ (က Moderator), နှင့် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု (HBI-19) ၏အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတွေ့ကြုံ တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးနောက်ထပ်မော်ဒယ်တွေအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကတော့ HBI-19 ရမှတ်ကှဲလှဲ၏အရေးပါမှုကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ, ဒုတိယခြေလှမ်းအတွက်ပါဝင်သူများ၏ကျားမအားလုံးမော်ဒယ်များအတွက်ကှဲလှဲရှင်းပြချက်တစ်သိသိသာသာတိုးမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားမတူညီသောဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များအားလုံးသိသိသာသာရှိကြ၏။ အဆိုပါ interaction ကပြဿနာဘာအတွက်သိသာထင်ရှားသောခဲ့ကြသည်တတိယခြေလှမ်းအတွက်, TSO တစ်ဖက်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအချိန်ကြုံတွေ့ပေမယ့်မဟုတ်အတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွက်မိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်။ အားလုံးတည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ထပ်မံတန်ဖိုးများဇယားတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် 4။ အဆိုပါအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရိုးရှင်းသောတောင်စောင်းနှင့်အတူရုပ်ပြနေကြသည်ပုံအတွက်လေ့လာဆန်းစစ် 2။ ပါဝင်သူ၏ကျားမများကကွဲကွာအဖြစ်ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အဆင့်ဆင့်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်တွေနဲ့သိသိသာသာဆက်စပ် Partners လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတွေ့မြင်နိုင် (r = .267, p <.001), ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအချိန်r = .429, p <.001) နှင့် TSO-တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ (r = .461, p <.001) ။ အမျိုးသားများတွင် HD လက္ခဏာများပြန့်ပွားမှုအဆင့်နှင့်မိတ်ဖက်လိင်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်များအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုမရှိပါ။r = .075, p <.001) နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်သိသာထင်ရှားသော်လည်းအားနည်းသောဆက်စပ်မှုများ (r = .305, p <.001) နှင့် TSO-တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေ (r = .239, p <.001) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တံငါသည်များကိုတွက်ချက်သည် z ဆက်စပ်မှုကိန်းများအကြားခြားနားချက်များ၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်။ Partners လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်၏ဆက်စပ်မှုများအကြားနှိုင်းယှဉ် (z = -3.4, p <.001), ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစားသုံးမှု (z = -2.44, p = .007) နှင့် TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (z = -3.1, p = .001) ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမျိုးသမီးများအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားဆက်စပ်မှုညွှန်ပြ။
စားပွဲတင် 4. တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်မှီခို variable ကိုအဖြစ် HBI-19 ပေါင်းလဒ်ရမှတ်တွေနဲ့ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး
အဓိကသက်ရောက်မှု PHQ-9 0.35 14.6 <.001
ကျား -0.47 -19.6 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ကျား× PHQ-9 -0.09 -3.89 <.001
အဓိကသက်ရောက်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ် 0.20 7.04 <.001
ကျား -0.35 -12.63 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ကျား×လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ် -0.01 -0.21 .834
အဓိကသက်ရောက်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏တမန်တော် 0.21 6.67 <.001
ကျား -0.38 -14.22 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ကျား×လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏တမန်တော် 0.07 2.17 .031
အဓိကသက်ရောက်မှု s ကို-IATsex 0.74 28.57 <.001
ကျား -0.05 -2.02 .043
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု s ကို-IATsex ကျား× 0.06 3.0 .006
အဓိကသက်ရောက်မှု တစ်ဖက်နှင့်အတူ TSO-အတွေ့အကြုံကို 0.19 6.0 <.001
ကျား -0.41 -16.0 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ကျား×တနာတစ်ဦးနှင့်အတူ TSO-အတွေ့အကြုံကို 0.13 4.08 <.001
အဓိကသက်ရောက်မှု TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ 0.36 12.19 <.001
ကျား -0.32 -12.16 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ကျား× TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ 0.15 5.37 <.001
အဓိကသက်ရောက်မှု မိတ်ဖက်များ၏နံပါတ် (အတိတ်နှစ်) 0.24 7.8 <.001
ကျား -0.41 -15.84 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု မိတ်ဖက်များ၏နံပါတ် (အတိတ်နှစ်) ကျား× 0.06 1.84 .066
အဓိကသက်ရောက်မှု ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (အချိန်) 0.61 11.36 <.001
ကျား -0.24 -7.74 <.001
အပြန်အလှန်ပြုမူမှု ကျား×ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (အချိန်) 0.36 7.01 <.001
မှတ်စု။ PHQ-9: လူနာကနျြးမာရေးမေးခွန်းလွှာ-9 ၏ရမှတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတိုင်းတာခြင်း, s ကို-IATsex: ပြဿနာဘာတိုင်းတာခြင်းတိုတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းလိင်၏ရမှတ်; TSO-coitus: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူကြုံတွေ့; TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်ခံစားခဲ့ရသညျ။
ပုံ 2. ရိုးရှင်းတောင်စောင်း။ မှတ်စု။ အဆိုပါ variable တွေကိုအဘို့အနိမ့်တန်ဖိုးများကိုတန်ဖိုးများနှင့်အတူဘာသာရပ်များအဘို့ခန့်မှန်းချက်များမှာ 1 SD အုပ်စုရဲ့ယုတ်များနှင့်မြင့်မားသောစံတန်ဖိုးများကိုအောက်တွင်တန်ဖိုးများနှင့်အတူဘာသာရပ်များအဘို့ခန့်မှန်းချက်များမှာ 1 SD အုပ်စုရဲ့ယုတ်အထက်။ PHQ-9: လူနာကနျြးမာရေးမေးခွန်းလွှာ-9 ၏ရမှတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေတိုင်းတာခြင်း။ s ကို-IATsex: အတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းလိင်၏ရမှတ်ပြဿနာဘာတိုင်းတာခြင်း။ TSO-coitus: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူကြုံတွေ့; TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ: စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်များတွင်အရေအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်ခံစားခဲ့ရသညျ။ *p <.05 ။ **p <.01 (အချိုးမညီသောအဓိပ္ပာယ်များ၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်)
အပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း HBI-53 နောက်ဆက်တွဲပစ္စည်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အဘို့အ 19 ၏အဆိုပြုပဏာမ cut-off ပေါင်းလဒ်ရမှတ်သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
ဒီအွန်လိုင်းလေ့လာမှုမှာတော့ 1,194 အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတစ်နမူနာ HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏အဆင့်ဆင့်အပေါ်မေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျား, မများကတည်းဖြတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကြောင်းကိုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူလုပ်ဆောင်မှတစ်စုံတစ်ဦးကိုအတင်းအကျပ်၏အမှန်တကယ်အပြုအမူအကြားအလားအလာအသင်းအဖွဲ့များ, စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ရင်းနှီးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏ (n = 74) HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏အဓိကရလဒ်များမှာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ၊ ပြproblemနာဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှု၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည့် TSO၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ကလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှု၊ HD လက္ခဏာပြင်းထန်၏။ ထို့အပြင်ပါဝင်သူများ၏ကျားမကွဲပြားမှုသည် TSO ၏အသင်းအဖွဲ့များနှင့် HD လက္ခဏာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအချိန်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အဓိကကျန်းမာရေးပြofနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ယား, 2013) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ (စိတ်ကျရောဂါနှင့် HD ကိုရောဂါလက္ခဏာတွေလက္ခဏာတွေအကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ထင်ရှားr စိတ်ကျရောဂါနှင့် HD လက္ခဏာလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်များအကြားနှစ်ဖက်သဘောတူဆက်သွယ်မှုကိုသံသယဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ဆောင်သော = .29) ။ ဤတွေ့ရှိချက်သည် meta-analysis သည်အလယ်အလတ်၊r = .34) စိတ်ကျရောဂါနှင့် HD လက္ခဏာတွေ၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ်Schultz, ချိတ်, Davis က, Penberthy, & Reid, 2014) ။ များသောအားဖြင့်နှင့်အတူလာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းသွားBancroft et al ။ , 2003) ။ သို့သျောလညျးအဖြစ် (အချို့ယောက်ျားအတွက်, မတိုင်မီပြသထားသည်Bancroft et al ။ , 2003) နှင့်အမျိုးသမီး (Opitz, Tsytsarev, & Froh, 2009), စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတည်းဖြတ် hierarchical ဆုတ်ယုတ်ဒီလေ့လာမှုအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေမြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်နှစ်ဦးစလုံးလိင်အတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုများတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက် hypersexual အပြုအမူပြဿနာများ, စိတ်ဖိစီးမှု, ဒါမှမဟုတ်မနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားချက်များကို (နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အသုံးပြုကြောင်းဖြစ်ပါသည်Schultz et al ။ , 2014) ။ နှုန်း se လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတဆင့် dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု Soothing လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သောကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအချိန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသည်ကို ထောက်. , များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အလုပ်မဖြစ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါSchultz et al ။ , 2014) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်စိတ်ကျရောဂါမြင့်မားရောဂါလက္ခဏာတွေအမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နဲ့ဆက်စပ်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းကြောင်းအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပိုပြီးလူကိုလက်ခံခဲ့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတဆင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း (ယောက်ျားအတွက်အတန်ငယ်မွငျ့မားစေခြင်းငှါFugere, ဝမ်းကွဲ, Riggs & Haerich, 2008).
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာဘာ, TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, အတိတ်နှစျတှငျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်နှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအချိန်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးကျားမအတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းကြ၏။ ထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုနှင့် ပတ်သက်. အဓိကရလဒ်များကိုရိုးရှင်းသောတောင်စောင်း TSO များ၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ်ကျား၏ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, HD လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်ပေါ်တစ်ဦးဖက်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမှတဆင့်အဖြစ်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အတူကြုံတွေ့ညွှန်ပြကြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပွငျဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက် ပို. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသတင်းပေးပို့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တဦးတည်းစုစုပေါင်းလူဦးရေစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မယ်ဆိုရင်, (ယောက်ျားမိန်းမတို့အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်လက်တွဲဖော်များယုတ်အရေအတွက်ကိုတန်းတူဖြစ်သင့်ပေမယ့်ယောက်ျားမကြာခဏအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပြီးဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်မိတ်ဖက်သတင်းပို့Mitchell က et al ။ , 2019) ။ ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခန့်မှန်းထက်ရေတွက်ခဲ့ကြပါလျှင်ယောက်ျား (မိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်အထင်ကြီးဟန်Mitchell က et al ။ , 2019) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာအတွက်, ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက် ပို. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သတင်းပို့ပါ။ တည်းဖြတ်ဆုတ်ယုတ်မြင့်မား TSO နှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုပိုမိုအဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းထင်ရှားလေ့လာဆန်းစစ်။ သူတို့ကျားစံချိန်စံညွှန်းလွန်ကျူးများအတွက်လူမှုရေးမရရှိခြင်း၏ကိုကွောကျရှံ့သောကွောငျ့ဖြစ်နိုင်သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ (မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် underreportအလက်ဇန်းဒါး & Fisher, 2003) ။ ရိုးရှင်းသောတောင်စောင်းများတွင်ယောက်ျားများတွင်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် HD လက္ခဏာပြမှုပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုနည်းသည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသားများတွင်မိတ်ဖက်လိင်ဆက်ဆံမှုပမာဏသည် HD လက္ခဏာ၏ပြင်းထန်မှုအဆင့်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံရသည်။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (ဥပမာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) တို့ကိုပိုမိုအထီးကျန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Schultz et al ။ , 2014) ။ ဤသည်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယောက်ျားအတွက် TSO-တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏မြင့်မားသောနှုန်းထား၏တစ်ဦးမွငျ့မားသောအချိန်ကတဆင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ hypersexual အပြုအမူအမျိုးသမီးမျှော်မှန်းထားသည်ကျပုံစံအပြုအမူနဲ့ပဋိပက္ခနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတဆင့်ဤအရပ်မှတိုးမြှင့်ရိပ်မိဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါငြင်းခုန်; နေစဉ်, ယောက်ျားအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်မြင့်ပိုပြီးလက်ခံဖြစ်တယ်။ သူတို့ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောမိမိတို့၏အမျိုးသမီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အပြုအမူနှိုင်းယှဉ်သောကွောငျ့အကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏မြင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားစိတျပူပခံစားရသည်ကိုJanssen & Bancroft, 2006) ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် higher လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးဖြစ်ကောင်း (အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက်ပိုရွေးချယ်လိင်ကနေအဓိကအားထားSjoberg & ကိုးလ်, 2018; Trivers, 1972) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယောက်ျားပင်လျော့နည်းဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်ရရှိလာတဲ့, သူတို့ရဲ့ hypersexual အပြုအမူအဘို့မိမိတို့ရွယ်တူများကတန်ဖိုးထားမည်အကြောင်းတည်း။ ထို့အပြင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများ (မေးခွန်းဖြင့်တိုင်းတာ, HD လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်ဖြစ်သော, လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏အတိုင်းအတာများပါဝင်သည်သင့်တယ်Walton, Lykins, & Bhullar, 2016).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင် (ကလူတစ်ဦး၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြိမ်းခြောက်မှုလက်ဆောင်နှင့်မကြာခဏနှစ်ဦးစလုံးကလေးများအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်Osterheider et al ။ , 2011) နှင့်အရွယ်ရောက်သူ (Ellsberg, Jansen, Heise, Watts, & Garcia-Moreno, 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏မြင့်မားသောနှုန်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်၏မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ပြသထားတယ်။ လိင်ရှိသည်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုအတင်းအကျပ်အကြောင်းကိုကူးယဉျအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဆန်းမဟုတ်ပါJoyal, Cossette, & Lapierre, 2014) ။ အကြီးစားအွန်လိုင်းနမူနာအကြောင်းကို 11 အမျိုးသမီးများ၏% နှင့်ယောက်ျား၏ 22% (ဒီစိတ်ကူးယဉ် share ကြောင်းညွှန်ပြJoyal et al ။ , 2014) ။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးများ၏အကြောင်းကို 21% နှင့်ဤစိတ်ကူးယဉ်အစီရင်ခံတင်ပြကြသူယောက်ျား၏အကြောင်းကို 59% ပင်မြင့်မားနံပါတ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ (ရဲတပ်ဖွဲ့မှအစီရင်ခံသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကိုသာသေးငယ်တဲ့အချိုးအစားအမျိုးသမီးကကျူးလွန်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်လုပ်စရာမလိုဘူးပြစ်မှုများ၏အမှန်တကယ်ငွေပမာဏအများကြီးပိုမိုမြင့်မားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်Cortoni, Babchishin, & Rat, 2016; Vandiver & Kercher, 2004) ။ ဤရလဒ်သည်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (နှိုင်းယှဉ် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှု၏အဆိုပြုအဆင့်ဆင့်ရောဂါယောက်ျားတစ်အုပ်စုတွင်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူများမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီများမှာEngel et al ။ , 2019) ။ ထို့အပွငျ hypersexuality (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism များအတွက်မျက်မြင်လက်တွေ့ထောက်ခံအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်တွေ့ရှိထားသည်မန်း, Hanson, & Thornton, 2010) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်လက်ရှိလေ့လာမှုများနေသော်လည်းဤတွေ့ရှိချက်များအနေဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကောက်ချက်ဆွဲရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်နှင့်၎င်းတို့၏လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive အပြုအမူ၏ဤအရပ်မှတိုးမြှင့်နှုန်းထားတစ်ခုတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည်, HD လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းအပြုအမူတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ coercive စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူမှနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ရန်နေရာအရပ်သည်အားဖြင့်သွေးဆောင်တစ်ဦးကအရှိန်မြင့်တက်လာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက်အိပ်ရလိမ့်မည်။ အသစ်အဆန်းရှာ (hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုတွေ့ထားပြီBanca et al ။ , 2016) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်၏စိတ်ကူးယဉ် hypersexuality ဆီသို့သဘောထားတွေနဲ့အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သစ်တစ်ခု, လိင်စိတ်ဝင်စားဖို့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ အနာဂတ်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများလိင် deviant အပြုအမူနှင့် hypersexuality ၏ချိတ်ဆက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ဖောက်ပြန်တဲ့မြင့်မားအန္တရာယ်မှာနေသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်ကုသမှုစူးစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုက၎င်း၏ကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်အတူအများကြီးသိသိသာသာရလဒ်များကိုမှတစ်ဆင့်သုတေသန၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်။ သို့သော်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းအချို့န့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုက HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အကဲဖြတ်ရန်သာ HBI-19 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးကလက်တွေ့အင်တာဗျူးအုပ်စုများသို့တစ်ဦးချင်းစီခွဲခြားရန်လိုအပ်သောကြပြီ။ ထို့အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆငျ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကဲဖြတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တို့ဟာပါဝင်ဘို့ထိုသူတို့လျော်ကြေးပေးမဖြစ်နိုင်သောအဖြစ်ပါဝင်သူ '' အချိန်အဖြစ်နည်းနည်းတက်ယူနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောအကဲဖြတ်များ၏အရေအတွက်ကန့်သတ်။ ကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ Self-အစီရင်ခံစာမေးခွန်းရန်, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကောက်ဒေတာကနေရေးဆွဲမရနိုင်ပါ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ hypersexual အပြုအမူတွေ၏ etiology သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ longitudinal ဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းများအခြေခံခဲ့ကြသည်။ အနာဂတ်သုတေသန (ဥပမာ, Bumby မုဒိမ်းစကေးထက်ပိုသွယ်ဝိုက်မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့် ပတ်သက်. သိမြင်မှုပျက်ယွင်းကိုဖုံးလွှမ်းသည်ဟုအကဲဖြတ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်Bumby, 1996) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့နမူနာအထွေထွေလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, ပညာရေးအဆင့်အတန်းလူဦးရေအဘို့ပုံမှန်ထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ လေ့လာမှုဖို့ weblink HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အဖိုရမ်များအတွက်အခြားသူတွေအကြား posted ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်အရေအတွက်ယေဘုယျလူဦးရေအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြောမြင့်မားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးအပေါ်အစီရင်ခံကြောင်းအများအပြားသတင်းစာများပါဝင်အတွက် HD ကိုလက္ခဏာပြင်းထန်မှုအဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမြတ်သောအကျိုးစီးပွားအတွက်ရလဒ်ကြရသောသူတို့၏အခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အတွက်ဝေါဟာရကို "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ" ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများတွင် hypersexuality ၏တစ်ဦးချင်းစီဝိသေသလက္ခဏာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ hypersexual အပြုအမူမကြာခဏအဆိုးအဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်သူတို့အလှည့်ပတ်သောသူတို့အားနှစ်ဦးစလုံး၏သုခချမ်းသာကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပြင်းထန် intra- နှင့်လူ့အခက်အခဲများနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းထောက်ပြချင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေး HD ကိုကုသမှုကိုလည်း comorbid မမှန်အပေါ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကျရောဂါအဖြစ်ကိုအခြားသူများဆီသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားအလာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အပြုအမူအာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့အပွငျဖြစ်နိုင်သည်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ကနေရရှိလာတဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုယောက်ျားထက်အမျိုးသမီး hypersexual အပြုအမူများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ခန့်မှန်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
je, TK, CS, JK, AK နှင့် uh အယူအဆနှင့်ဒီဇိုင်းဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ AK, သင်္ဘော MV နှင့် je ဒေတာစုဆောင်းခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ je နှင့် AK စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ je, AK, သင်္ဘော MV, CS ငါ-AH, JK နှင့် TK ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အနက်ကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ uh နှင့် TK ကြီးကြပ်မှုလေ့လာဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။
အလက်ဇန်းဒါး, အမ်ဂျီ, & Fisher သည် တီ D. (2003). အမှန်တရားနှင့်အကျိုးဆက်များ: Self-အစီရင်ခံလိင်လိင်ကျပုံစံအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုဆနျးစစျဖို့အတုအယောင်ပိုက်လိုင်းအသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 40 (1), 27-35။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224490309552164 Crossref, Medline, Google Scholar
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး [ယား] ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (5th ed ။). Arlington, VA: American Psychiatric Association. Crossref, Google Scholar
BANCA, P., မောရစ်, အယ်လ်အက်စ်, မစ်ချယ်, S., Harrison, N. A., Potenza, အမ် N., & Voon, V. (2016). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ စိတ်ရောဂါသုတေသန 72 ၏ဂျာနယ်, 91-101။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.10.017 Crossref, Medline, Google Scholar
Bancroft, J., Janssen, E., Ph, D., ခိုင်မာတဲ့, D., Carnes, L., Vukadinovic, Z., & long က, ဂျေအက်စ် (2003). လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက်ခံစားချက်နှင့်လိင်အကြား ဆက်စပ်.။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 32 (3) ၏မော်ကွန်း, 217-230။ Doi:https://doi.org/10.1023/A:1023409516739 Crossref, Medline, Google Scholar
အနက်ရောင်, အမ်စီ, ပင်စိမ်း, ကေစီ, Smith က အက်စ်ဂျီ, Walters က, အမ်အယ်လ်, Merrick, အမ်တီ, Chen က J., & Stevens, မစ္စတာ။ (2011) ။ အမျိုးသားရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုစစ်တမ်း 2010 အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ (စစ။ 1-124). အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ: ထိခိုက်အနာတရရရှိမှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအမျိုးသားစင်တာ, ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ. Google Scholar
နှစ်ဦးစလုံး, B., Kovács, M., Tóth-király, I., ရိဒ်, R. C., မာကု, D., Orosz, G., & Demetrovics, Z. (2018). တစ်အကြီးစား nonclinical နမူနာသုံးပြီး Hypersexual အပြုအမူ Inventory ၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ အဆိုပါလိင်သုတေသနဂျာနယ်, 56 (2), 180-190။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1494262 Crossref, Medline, Google Scholar
Bumby, ကေအမ် (1996). ကလေးကဗလက္နှင့်မုဒိန်းသမား၏သိမြင်မှုပျက်ယွင်းအကဲဖြတ်: အဗလက္နှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုအကြေးခွံများဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေးတစ်ဂျာနယ်, 8 (1), 37-54။ Doi:https://doi.org/10.1177/107906329600800105 Crossref, Google Scholar
Cooper က, A. (1998). လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ၊ ၁၂ (၁)၊ 187-193။ Doi:https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.187 Crossref, Google Scholar
Cortoni, F., Babchishin, ကေအမ်, & ကြွက်, C. (2016). အမျိုးသမီးနေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏အချိုးအစားအတွေးထက် ပို. မြင့်မားသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးနှင့်အပြုအမူ, 44 (2), 145-162။ Doi:https://doi.org/10.1177/0093854816658923 Crossref, Google Scholar
Dickenson, ဂျေအေ, Gleason, N., Coleman, E., & မိုင်းလုပ်သား, အမ်အိပ်ချ် (2018). အခက်အခဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်နဲ့ဆက်စပ်ရောက်သောပျံ့နှံ့။ ဂျေအေအမ်အေကွန်ယက်ဖွင့်ပါ, 1 (7), e184468။ Doi:https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.4468 Crossref, Medline, Google Scholar
Ellsberg, M., Jansen, H., Heise, L., watts, C., & Garcia က-Moreno, C. (2008). အဆိုပါ WHO က Multi-တိုင်းပြည်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအပေါ်လေ့လာမှုနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ရင်းနှီးသောမိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး: တစ်ခုကစူးစမ်းလေ့လာမှု။ The Lancet, 371 (9619), 1165-1172။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60522-X Crossref, Medline, Google Scholar
အိန်ဂျယ်, J., Veit, M., နစ်မြုပ်, C., Heitland, I., Kneer, J., Hillemacher, T., Hartmann, U., & Kruger, T. H. C. (2019). တူညီတူညီပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့: လိင် @ ဦးနှောက်လေ့လာမှုမှာ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျား၏လက်တွေ့စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ လက်တွေ့ဆေးပညာဂျာနယ်, 8 (2), 157။ Doi:https://doi.org/10.3390/jcm8020157 Crossref, Google Scholar
Fugere, အမ်အေ, ဝမ်းကွဲ, အေဂျေ, Riggs, အမ်အယ်လ်, & Haerich, P. (2008). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်နှစ်ဆစံချိန်စံညွှန်းများ: တစ်ဦးကစာပေပါဝင်သူကျားမအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံ။ လိင် & ယဉ်ကျေးမှု, 12 (3), 169-182။ Doi:https://doi.org/10.1007/s12119-008-9029-7 Crossref, Google Scholar
Grant က, ဂျေအီး, Atmaca, M., Fineberg, N. A., Fontenelle, အယ်လ်အက်ဖ်, Matsunaga, H., Janardhan Reddy, Y. C., Simpson, အိပ်ချ်ခ, Thomsen, P. H., ဗန်တွင်း Heuvel, O. A., နွားငယ်သား, D., ဝုဒ်, W. ဒဗလျူ, & Stein, J. ဂျေ (2014). အဆိုပါ ICD-11 အတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်စှဲ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 13 (2), 125-127။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20115 Crossref, Medline, Google Scholar
Grubbs, ဂျေခ, Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, & ပယ်ရီ, အက်စ်အယ်လ် (2018). တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းမှ self-အစီရင်ခံတင်ပြစွဲ: အသုံးပြုမှုအလေ့အထများ, ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရား incongruence များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 8 (1), 88-93။ Doi:https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.134 လင့်ခ်, Google Scholar
Hald, G. အမ်, Malamuth, N. အမ်, & Yuen, C. (2010). ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေ: nonexperimental လေ့လာမှုများအတွက်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်။ ရန်လိုမူအကျင့်, 36 (1), 14-20။ Doi:https://doi.org/10.1002/ab.20328 Crossref, Medline, Google Scholar
Janghorbani, M., & lam, တီအိပ်ချ် (2003). ဟောင်ကောင်လူငယ်လူကြီးများအားဖြင့်လိင်မီဒီယာအသုံးပြုမှု: ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 32 (6) ၏မော်ကွန်း, 545-553။ Doi:https://doi.org/10.1023/A:1026089511526 Crossref, Medline, Google Scholar
Janssen, E., & Bancroft, J. (2006). Dual control model: လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားဆီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္။, တွင် E. Janssen (Ed က။ ), လိင်၏ psychophysiology (စစ။ 1-11). Bloomington, IN: အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်ကသတင်းထုတ်. Google Scholar
Joyal, C. C., Cossette, A., & Lapierre, V. (2014). တစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်အတိအကျကဘာလဲ? အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 12 (2), 328-340။ Doi:https://doi.org/10.1111/jsm.12734 Crossref, Medline, Google Scholar
Kafka, အမ်ပီ, & Hennen, J. (2002). ယောက်ျားတစ်ဦး DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ comorbidity လေ့လာမှု (n paraphilias နှင့် paraphilia-related မမှန်မှုများနှင့်အတူ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေးတစ်ဂျာနယ်, 14 (4), 349-366။ Doi:https://doi.org/10.1177/107906320201400405 Crossref, Medline, Google Scholar
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Krueger, R. ခ, Briken, P., ပထမဦးစွာ အမ်ခ, Stein, J. ဂျေ, Kaplan, ဒေါ်။, & ရိဒ်, G. အမ် (2018). အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 17 (1), 109-109။ Doi:https://doi.org/10.1002/wps.20499 Crossref, Medline, Google Scholar
ကရွန်ကီ, K., & Spitzer, R. L. (2002). အဆိုပါ PHQ-9: အသစ်စိတ်ကျရောဂါအဖြေရှာတဲ့နှင့်ပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာ။ စိတ်ရောဂါရာဇဝင်, 32 (9), 509-515။ Doi:https://doi.org/10.3928/0048-5713-20020901-06 Crossref, Google Scholar
Löwe, B., ကရွန်ကီ, K., Herzog, W., & Gräfe, K. (2004). အဆိုပါလူနာကနျြးမာရေးမေးခွန်းလွှာ (PHQ-9) ၏ပြောင်းလဲမှုကိုမှထိခိုက်လွယ်: တစ်အကျဉ်း Self-အစီရင်ခံစာလက်နက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါရလဒ်ကိုတိုင်းတာခြင်း။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 81 (1), 61-66။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0165-0327(03)00198-8 Crossref, Medline, Google Scholar
မန်း, ပြန်လည်။, Hanson, R. K., & Thornton, D. (2010). လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ recidivism များအတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအန္တရာယ်အချက်များ၏သဘောသဘာဝအပေါ်တချို့ကအဆိုပြုချက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေးတစ်ဂျာနယ်, 22 (2), 191-191။ Doi:https://doi.org/10.1177/1079063210366039 Crossref, Medline, Google Scholar
မစ်ချယ်, ကေ R., မာ, C. H., Prah, P., Clifton, S., Tanton, C., ကောင်းပြီ, K., & Copas, A. (2019). အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက် ပို. ဆန့်ကျင်ဘက်-လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်သတင်းပို့သလဲ? ဗြိတိန်အမျိုးသားရေးဖြစ်နိုင်ခြေစစ်တမ်းများတွင်ကျားမကွာဟမှုလေ့လာခြင်း။ အဆိုပါလိင်သုတေသနဂျာနယ်, 56 (1), 1-8။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1481193 Crossref, Medline, Google Scholar
Montgomery-ဂရေဟမ်, S. (2017). hypersexual ရောဂါ၏စိတ်ကူးနှင့်အကဲဖြတ်: စာပေ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ,5(2), 146-162။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2016.11.001 Crossref, Medline, Google Scholar
Opitz, M. အမ်, Tsytsarev, SV, & Froh, J. (2009). အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်မိသားစုဒိုင်းနမစ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်မသန်စွမ်းမှု - ကုသမှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဂျာနယ်၊ ၁၆ (၄)၊ 37-41။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160903375749 Google Scholar
Osterheider, M., ပိတ်ပင်, R., Briken, P., Goldbeck, L., Hoyer, J., Santtila, P., Turner, D., & Eisenbarth, H. (2011). frequency, ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု etiological မော်ဒယ်များနှင့်အကျိုးဆက်များ: ဂျာမန် Multi-site ကို MiKADO စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်မှန်းချက်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုသမှု,6(2), 1-7။ မှရယူရန် https://doi.org/http://www.sexual-offender-treatment.org/105.html Google Scholar
Raymond, N. C., Coleman, E., & မိုင်းလုပ်သား, အမ်အိပ်ချ် (2003). စိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 44 (5), 370-380။ Doi:https://doi.org/10.1016/S0010-440X(03)00110-X Crossref, Medline, Google Scholar
ရိဒ်, R. C., လက်သမား, ခ N., Spackman, M., & မည်, D. L. (2008). Alexithymia, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများနှင့် hypersexual အပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူနာအတွက်စိတ်ဖိစီးကျရောက်နေတဲ့မှအားနည်းချက်။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 34 (2), 133-149။ Doi:https://doi.org/10.1080/00926230701636197 Crossref, Medline, Google Scholar
ရိဒ်, R. C., Garo, S., လက်သမား, ခ N., & Coleman, E. (2011). hypersexual ယောက်ျားတစ်ဦးလူနာနမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးကအံ့သြစရာတွေ့ရှိချက်။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 8 (8), 2227-2236။ Doi:https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02314.x Crossref, Medline, Google Scholar
Rissel, C., ရစ်ချတာ, J., de Visser, R. O., Mckee, A., Yeung, A., Rissel, C., & Caruana, T. (2016). သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးကပရိုဖိုင်း: ကနျြးမာရေး၏ဒုတိယသြစတြေးလျလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆက်ဆံရေး။ အဆိုပါလိင်သုတေသနဂျာနယ်, 54 (2), 227-240။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1191597 Crossref, Medline, Google Scholar
Schultz, K., ချိတ်, ဂျေ။, Davis က, E. အီး, Penberthy, ဂျေကေ, & ရိဒ်, R. C. (2014). Nonparaphilic hypersexual အပြုအမူနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ: စာပေ၏ Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်။ လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးကုထုံးဂျာနယ်၊ ၄၀ (၆)၊ 477-487။ Doi:https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.772551 Crossref, Medline, Google Scholar
Sjoberg, အီးအေ, & ကိုးလ်, G. အ G. အ (2018). တားစီး၏ Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-Go ကိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်လိင်ကွဲပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 47 (2) ၏မော်ကွန်း, 537-542။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-017-1010-9 Crossref, Medline, Google Scholar
Skegg, K., Nada-Raja, S., Dickson, N., & ပေါလုက, C. (2010). အဆိုပါဒန်နီးဒင် Multidisciplinary ကနျြးမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီလေ့လာမှုကနေငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးဆောင်များတွင်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ "ထိန်းချုပ်မှုထဲကခံစား"။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 39 (4) ၏မော်ကွန်း, 968-978။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-009-9504-8 Crossref, Medline, Google Scholar
Træen, B., Nilsen, တီအက်စ်, & Stigum, H. (2006). အစဉ်အလာမီဒီယာနှင့်နော်ဝေအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 43 (3), 245-254။ Doi:https://doi.org/10.1080/00224490609552323 Crossref, Medline, Google Scholar
Trivers, R. L. (1972). မိဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေး, တွင် B. ကမ့်ဘဲလ် (။ Ed က), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးနှင့်လူသား၏မျိုးနွယ်: 1871-1971 (စစ။ 136-179). ချီကာဂို, IL: Aldine. Google Scholar
Vandiver, M. အမ်, & Kercher, G. (2004). တက္ကဆက်ပြည်နယ်များတွင်မှတ်ပုံတင်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်သားကောင်ဝိသေသလက္ခဏာများ: အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးအဆိုပြုထား typology။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေးတစ်ဂျာနယ်, 16 (2), 121-137။ Doi:https://doi.org/10.1177/107906320401600203 Crossref, Medline, Google Scholar
ဝေါ်လ်တန်, M., Cantor, J., Bhullar, N., & Lykins, A. (2017). Hypersexuality: တစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှုနှင့်မှမိတ်ဆက်စကား "sexhavior သံသရာ။ " လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 46 (8) ၏မော်ကွန်း, 2231-2251။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-017-0991-8 Crossref, Medline, Google Scholar
ဝေါ်လ်တန်, အမ်တီ, Lykins, အေ D., & Bhullar, N. (2016). လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကြိမ်နှုန်း: hypersexuality ကိုနားလည်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, 45 (4) ၏မော်ကွန်း, 777-782။ Doi:https://doi.org/10.1007/s10508-016-0727-1 Crossref, Medline, Google Scholar
Weiss, D. (2004). အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်အထီးလိင်စွဲများတွင်စိတ်ကျရောဂါ၏ပျံ့နှံ့။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းခြင်း (၇) (၁-၂)၊ 57-69။ Doi:https://doi.org/10.1080/10720160490458247 Crossref, Google Scholar
Wéry, A., & Billieux, J. (2017). စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေပြဿနာဘာ: Conceptual, အကဲဖြတ်နှင့်ကုသရေး။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64, 238-246။ Doi:https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.007 Crossref, Medline, Google Scholar